Marvel ၏ SHIELD ရာသီ၏ ၇ ရာသီသည်စက်တင်ဘာလတွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည် - တီဗီ
SHIELD ရာသီ7၏အံ့’s ခြင်း၏အေးဂျင့်များသည်စက်တင်ဘာလ ၂၀၀ တွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာသည်
SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် - ABC / Mitch Haaseth)
Enola Holmes သည်ရက်စွဲ၊ အကျဉ်းချုပ်၊ သရုပ်ဆောင်၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည် ဒါဟာ Drew Ray Tanner ရဲ့အသက်၊ လူမျိုး၊ Instagram၊ အလုပ်လုပ်သည်။ ချာလီသရုပ်ဆောင်သူနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်သမျှ
Netflix အပေါ် SHIELD ရာသီ7လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ
SHIELD ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် hit စီးရီး၏နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်သောရာသီ 7, မှလာမယ့်နေသည် Netflix မကြာခင်! သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ABC ရုပ်သံမှစီးရီးနှင့်ရာသီဇာတ်သိမ်းကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ABC နှင့် Netflix တို့ကမူအတည်မပြုရသေးပါ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ (၇) ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ၊ စီးရီး၏နောက်ဆုံးရာသီသည် Netflix သို့ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိသည်။
mtv အချစ်ဆိုတာတစ်ရာသီပဲ 4
ပြီးခဲ့သည့်ရာသီတော်တော်များများတွင် TV ရုပ်သံစီးရီး၏ရာသီတစ်ခုစီကို ABC ရုပ်သံမှရာသီနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်ရက် ၃၀ အကြာ Netflix သို့ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျနော်တို့အဖြစ်ကောင်းစွာ, ရာသီ7အမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။
ကြောင်းဖြစ်ပျက်ယူဆလျှင် SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် Netflix အပေါ်ရာသီ7လွှတ်ပေးသည့်နေ့စွဲဖြစ်လိမ့်မည် သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာ 11, 2020 ။
Netflix နှင့် ABC တို့မှထိုနေ့စွဲကိုထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ Netflix ကယခုလအကုန်ပိုင်းတွင်၊ နောက်လတွင်လာမည့်အရာ၊ လမကုန်မီတစ်ပတ်ခန့်အလိုသို့ဖြစ်သည့်စာရင်းကိုကြေငြာသည်။ ကျနော်တို့လျှင်သိရပါလိမ့်မယ် SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ7သေချာပေါက် Netflix သို့လာမယ့်နေသည်။
7 သေစေနိုင်သောအပြစ်များရာသီ4လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ
လာမယ့်လမှာ Netflix ဆီကို ဦး တည်နေတယ်ဆိုတာသေချာတဲ့ ၉၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ငါတူပေမယ့်နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်လို့လွှတ်ပေးမယ့်နေ့ကနှောင့်နှေးမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကနှင့်အတူအတိတ်တွင်ဖြစ်ပျက်ပါတယ် မဒ်ဒီဆန်ရိပ်သာနေသူများ နှင့်အနည်းငယ်အခြားပြပွဲ။ ၎င်းတို့သည် Netflix သို့သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်ကြောင့်ဖြန့်ချိရန်အကြောင်းများကြောင့်ပြန်လည်နေရာချထားခဲ့သည်။
ငါနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နိုင်ပုံပါဘဲ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ်များ, ဒါပေမယ့်ငါကလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းရန်မှာကြည့်ရှုနိုင်သည်ကိုနောက်ထပ်ပြပွဲ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် Netflix အပေါ်ရာသီ7လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲဖြစ်ပါတယ် လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ။ ဒီစီးရီးဟာဒီနွေ ဦး ရာသီမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရာသီကို Netflix တွင်ဖြန့်ချိသည့်ရက်အနည်းငယ်အကြာအတိအကျထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်များသည်တူညီသောကွန်ယက်ပေါ်တွင်ရှိပြီး Netflix နှင့်အတူတူညီသော streaming အစီအစဉ်ရှိသည်။
အကယ်၍ လူသတ်မှုနှင့်အတူ Away ရဖို့ကိုဘယ်လို ပြီးခဲ့သည့်ရာသီ 30 ရက်စီးရီးဇာတျသိမျးပြီးနောက် Netflix သို့ရောက်ကြ၏, ငါအတူတူပင်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်သေချာပါတယ် SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီ။
၏ပထမခြောက်ရာသီ SHIELD ၏ကိုယ်စားလှယ် လက်ရှိတွင် Netflix တွင် streaming နေကြသည်။ နောက်ဆုံးရာသီလာမည့်လမကျမှီတက်ဖမ်းမိဖို့အချိန်!
နောက်တစ်ခု:ယခုအချိန်အထိ 2020 ၏အကောင်းဆုံး Netflix က 21 ပြပွဲ
လူသတ်ရာသီ3အချိန်ဇယားဖြင့်မည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်မည်နည်း
တ ဦး တည်းလာကြတယ်လူကိုဇာတ်လမ်းတွဲ 23
ဘယ်အချိန်မှာနွေ ဦး အနိုင်အထက်ထွက်ခဲ့ပါဘူး